Karen Community Association UK: February 2012
Burma - Breaking the wall of censorship
Forgotten Friends from Burma
ကေအဲန်ယူနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ တပ်မဟာ ၅နယ်မြေတွင် ...
ပဒိုသမိန်ထွန်း ပြောပြသော ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်ြးေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမှ အရွေးခံမည်ကို ဒေသခံ ...
ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးမှုဖြင့် ခမရ ၃၂၁ အား တရားစွဲမှု စတင်ြ...
Invitation for Emergency Karen Worldwide Conferenc...
Devolopment without Freedom (Analysis on Dawei Dee...
Dawei Tavoy Controversial Development Project
From Ceasefire to Political Dialogue ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်ပြဿနာ-BCES
နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အားလုံးပါဝင်တဲ့ အစည်းအဝေးတခု အမြန်လို
လက်တလော နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အားလုံးပါဝင်တဲ့ အစည်းအဝေးတခု အမြန်လိုအပ်နေကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား ခရီးစဉ်မှ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာတဲ့
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ကိုမြအေးက ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောလိုက် ပါတယ်။ ရန်ကုန်၊
မန္တလေးစသည့် မြို့ကြီးများတွင်သာ ယခုကဲ့သို့ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် အချို့ကို ခံစားနေရသော်လည်း တိုင်းရင်းသားများမှာ ၎င်းတို့ ဒေသတွင် စစ်မက်အမြဲ ဖြစ်ပွားနေခဲ့သည့် အတွက်
တစုံတရာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နေသည်ဟု မမြင်ကြောင်း ကိုမြအေးက ပြောပါတယ်။ ကိုမြအေးနဲ့ အတူ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချိုကလည်း ခရီးစဉ်အတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့
ရသည်များကို မီဒီယာများကို ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား ခရီးစဉ်အတွင်း ဘာသာရေး၊ လှုမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး အလွှာအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အကြပ်
အတည်းများကို ဖြေရှင်းရန် အတွက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက် ၄ ချက်ပါ ကြေငြာချက်ကိုလည်း ဝေငှ ခဲ့ပါတယ်။ ကိုမြအေး၊ ကိုပြုံးချို တို့နဲ့ အတူ
ကိုထွန်းမြင့်အောင်၊ ကိုမြတ်သူနဲ့ အခြား ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဟာ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ အခြား ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကတော့ အထက် မြန်မာ
ပြည် မန္တလေး ခရီးစဉ် အတွက် ကျန်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 10:010comments
Posted by KCA.UK at 12:510comments
ANGOON—If you are currently visiting Rangoon, perhaps it's an idea to leave your guide book behind in the hotel, and instead add to your itinerary two new attractions that are probably never included in the tourist program.
The first sightseeing location would be the headquarters of the country's main opposition party, the National League for Democracy (NLD). Previously any visitor to this modest building in Bahan Township was treated with suspicion, and the military authorities did not hesitate to take anyone loitering around into custody for questioning.
On Thursday morning,atour bus pulled up in front of the NLD office, justastone's throw from Shwedagon Pagoda, and tourists of different ages from different countries descended the bus and immediately began snapping pictures of the NLD flag flying above the entranceway. Some even posed for snap shots with party members.
"In the past, we could only take pictures [of the NLD office] fromapassing vehicle," said Christophe, 45,aFrenchman who is on his second visit to the country.
"Does someone have any extra kyat?"agentleman withaEuropean accent asks, wavingaUS $100 note.
"We have foreign visitors every day who just come here to havealook at the office and buy some NLD souvenirs,” said Daw Le Le, 64,amember of the campaign finance committee. “Some drop in alone. Others come in groups.”
"This is the second time this week I have brought tourists to the NLD headquarters,” saidatour guide. “Our next stop is Auntie's house.”
And so the visitors got back on the bus and headed north on the short drive to Inya Lake where the second stop on the day's itinerary—and undoubtedly the most highly anticipated—wasavisit to Suu Kyi's house.
Even though they knew that they wouldn't be allowed to go inside, the foreign tourists wanted to payavisit to the famous Rangoon landmark “if only to catchaglimpse of her.”
Mary James,aretired teacher from Louisiana, said, “I can't believe this is where Suu Kyi spent 15 of the past 20 years under house arrest. We have takenafew pictures outside the gate.”
Since the release of Burma's charismatic opposition leader in late 2010, Burma has seenasteady increase in visitor numbers, and the Southeast Asian country suddenly became one of the hottest destinations in the region after Suu Kyi declared: “We want people to come to Burma” in the summer of 2011.
High recommendations from Lonely Planet, CNN and other leading publications naming Burma, or Myanmar, as one of the top places to visit in 2012 has resulted inasudden influx of tourists, despite the fact that the country's tourism industry is still not ready to handle mass tourism.
"We haven't had any complaints from our visitors or reports that they were intimidated by the authorities for coming here,” saidatour operator.
Christophe admitted that he had felt somewhat nervous about Burma's notorious military personnel.
"But we are only here foravisit—nothing political—and we are just buying some party souvenirs,” he said. “If it's OK for other visitors to come here, I see no harm in it for me, too.”
ဒီဗွီဒီယိုထွက်တာ တနှစ်လောက်ရှိပေမဲ့ မဟောင်းသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ
Burma - Breaking the wall of censorship from Handcrafted Films on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 13:420comments
Forgotten Friends from Burma short film from benny manser on Vimeo.
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်၊ ၂၀၁၂။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသတွင် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA)မှ နယ်ခြား စောင့်တပ် (BGF)တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စီးနင်းလာသည့် ကားတစ်စီးအား ယမန်နေ့က ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ၅ဦး ထိခိုက်သေဆုံး ခဲ့သည်ဟု ဒီကေဘီအေ ဘက်က ပြောသည်။
ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီခွဲအချိန်၌ မြိုင်ကြီးငူလမ်းခွဲတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ် (၁၀၁၁)တပ်ရင်း စီးနင်းလာသည့် ကားကို ဗိုလ်ဘိ ဦးဆောင် သည့် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကားထဲရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဗိုလ်ကြီးအေးဝင်းမင်းနှင့် တပ်သားတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး တပ်သား ၃ဦးမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့သည် ရင်းပိုင်းချောင်းမှ မြိုင်ကြီးငူတစ်လျှောက် အနီးအနားရှိ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စခန်းများတွင် လက်နက် ၂၃လက်ကို ၀င်ရောက်သိမ်းဆည်းမှုကြောင့် ဒီကေဘီအေဘက်မှ ယခုလို ပစ်ခတ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတပ်မှူးက ပြော သည်။
ဗိုလ်မှူးစိုးနိုင် ဦးစီးသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း(၁၀၁၁)သည် မြိုင်ကြီးငူဒေသ ရင်းပိုင်းနေရာရှိ ဗိုလ်ကြီးရဲချစ် ဦးစီးသော DKBA တပ်ဖွဲ့ကို မိနစ် ၂၀ကြာ ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး လက်နက်များကို သိမ်းယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း KNLA တပ်မဟာ(၇)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂျော်နီက အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခုလို နှစ်ဖက် စစ်ရေးအခြေအနေ တင်းမာမှုကြောင့် ဒီကေဘီအေ အခြေစိုက်ရာ မြိုင်ကြီးငူဒေသနှင့် မဲ့သဝေါဒေသဘက်တွင် စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်ထားသကဲ့သို့ နယ်ခြာစောင့်တပ်ဘက်တွင်လည်း စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်သည့် BGF နှင့် DKBA တို့ နှစ်ဖက်အခြေအနေ တင်းမာနေချိန်တွင် အင်အားရာနှင့်ချီသည့် မြန်မာအစိုးရ ၏ တပ်များလည်း ထိုဒေသသို့ ရောက်ရှိလာနေသည်ဟု နယ်စပ်သတင်းများအရ သိရသည်။
ကေအဲန်ယူနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ တပ်မဟာ ၅နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား
အဲခေါင်သောင့်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်
ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်မဟာ ၅တပ်ဖွဲ့ဝင်များ
ကေအဲန်ယူ လက်အောက်ခံ ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ဖွဲ့နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ ယနေ့ မနက်က ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မြန်မာ စစ်တပ်မှ ရတခ လက်အောက်ခံ ခလရ ၉၆တပ်ရင်းမှ စစ်ကြောင်းနှင့် ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်မဟာ ၅ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၄၅မိနစ်ခန့် ကြာသည့် အဆိုပါ တိုက်ပွဲ တွင် မြန်မာ စစ်တပ်ဘက်မှ တစ်ဒါဇင်နီးပါး ထိခိုက် သေဆုံးမှုရှိပြီး ကေအဲန်အယ်လ်အေ ဘက်မှ အထိအခိုက် မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာစစ်တပ်မှ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေချိန်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး စစ်ရေး တိုးချဲ့ လှုပ်ရှားလာမှုကြောင့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ပြီး စစ်ရေး တိုးချဲ့မှုများ ပြုလုပ်လျှင် တိုက်ပွဲ ပိုပြီး ပြင်းထန်လာနိုင်သည်ဟု ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်မှူးတဦးက ပြောဆိုသည်.။
Posted by KCA.UK at 10:57 1 comments
ပဒိုသမိန်ထွန်း ပြောပြသော ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်း-ရုပ်သံ
By AHUNT PHONE MYAT (DVB) Published: 8 February 2012
Troops from the Shan State Army at their headquarters in Loi Taileng (Francis Wade)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမှ အရွေးခံမည်ကို ဒေသခံ ကရင်များမှကြိုဆို
Posted by KCA.UK at 13:090comments
Mizzima, Monday, 06 February 2012 12:03
Invitation for Emergency Karen Worldwide Conference
Dear Karen nationals at home and abroad,
We would like to invite you to attend Karen Worldwide Conference which will be held from 27th February- 1st March 2012 in our motherland of Kawthoolei.
This conference will be held six weeks after the initial ceasefire agreement between the Karen National Union and Thein Sein Government, to analyse the current situation of the Karen people, to come together asanation in support of the KNU for further talks towardsagenuine political solution for the Karen people and Burma .
Given the fact that there have been some developments inside Burma , this is suchacrucial time for our nation. Therefore, it is extremely important that the voices from different Karen communities and backgrounds around the world are included in any further political negotiations.
We appreciate this isashort notice, but we really hope that you can participate with us at this crucial time. Your opinions and contributions are very important to us. However, if you can not make it in person, please feel free to send your opinions to karen_unity@yahoo.com by Wednesday 23rd February 2012.
Please see the attached documents for more logistic information for the conference and contact Naw Hsa Moo at 081-7408119
Karen Unity Seminar Committee
Posted by KCA.UK at 11:110comments
သောသီခိုမှ တဆင့်- မူရင်း ဟစ်တိုင်
ဗိုလ်ချူပ်ထိန်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းကောင်စီအဖွဲ့KNU မှခွဲထွက်စဉ်ကာလက လူသိအတော်များခဲ့တဲ့ သူ တစ်ဦး ယနေ့ မီဒီယာပေါ်မှာ ပြန်ပေါ်လာပါပြီ။ အချိန်ကာလ တစ်ခု အတန်ကြာအောင် မြေလျှိူးပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်း ခုချိန်မှ ချိန်ကိုက် ပြန်ပေါ်လာတာ စိတ်ဝင်းစားစရာပါ။ တချိန်က သူဟာ ငြိမ်းကောင်စီ တပ်မှူးတစ်ဦးပါ။ ဗိုလ်မှူးချူပ် တီမသေ တို့ ရဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးပါ။ ဗိုလ်ချူပ်ထိန်မောင် ငြိမ်းကောင်စီ အဖွဲ့ နှင့် နအဖ စစ်အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးယူမည့် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလတွေမှာ ရေဒီယို အသံလွင့်ဌာနတွေကို ဒိုင်ခံပြီး ဖြေဆိုသွားခဲ့တဲ့ သူ့ ရဲ့ အသံတွေကို လည်း ကြားယောင်မိပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုအချိန်ကာလက ငြိမ်းကောင်စီ တပ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်ကျော် တစ်ယောက် ဟစ်တိုင်သတင်းစာမျက်နှာ အမှတ်တရ ကဏ္ဍမှ ရင်ဖွင့်သွားတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။
မူရင်း - http://www.hittai.net/?show=rm&fileid=102&t=home7&id=7
အမှတ်တရ ကဏ္ဍ﻿ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘိုမြ(၁)
- Mk Mk--၂-၂ -၂၀၁၂
“ ဗိုလ်မြအမျိုးတွေကတော့ ရဲတာပေါ့ဗျာ…….ပြေးစရာရှိတယ်လေ….ကျုပ်တို့ကတော့ ပြေးစရာမြေ မရှိဘူးဗျို့  အရမ်းမလုပ် ရဲဘူး ”
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အရေးအခင်းတွင် ထင်ရှားစွာ ပါဝင်ခဲ့သူများ ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ လိုက်နေပြီဟု မိတ်ဆွေများက သတိပေးကြသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၇ နှစ်ခန့်က ထောက်လှမ်းရေးအချုပ်ခန်း၏ အိမ်မက်ဆိုးများကို ပြန်လည်ရင်မဆ်ိုင်လိုတော့၊ ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးလို အဖမ်းမခံနိုင်တော့ ၊ ထို့ကြောင့် ည များတွင်အသိမိတ်ဆွေများ အိမ်တွင်ပြောင်း အိပ်နေရသည်။
သို့သော် မည်သည့်မိတ်ဆွေမျှ တစ်ညနှစ်ညထက်ပို၍ လက်မခံရဲကြ ။
တချို့ အိမ်ပေါ်တက် သွားသည်နှင့် အိမ်သူအိမ် သားများ မျက်စိမျက်နှာပျက်နေကြသည်။
တချို့က ပြောင်ပြောင်ပင် ငြင်းလွှတ်သည်။ အိပ်စရာမြေမရှိဖြစ်နေ စဉ်အဆင်ပြေသောနေရာတစ်ခု သွားတွေ့သည်။
မိတ်ဆွေအစိုးရအရာရှိတစ်ဦး၏ရုံးဝန်းဖြစ် သည်။ထိုဌာနရုံးဝန်း ထဲတွင် ထိုအရာရှိ၏အိမ်ရှိသည်။
ထိုစဉ်ကအရာရာကျို့တို့ကျဲတဲဖြစ်နေဆဲ၊နေ့ခင်းရုံးဖွင့်သည်... ဘာအလုပ်မျှမရှိ…ညပိုင်းတွင်ထိုအရာရှိအိမ်၌ ပိုကာဝိုင်းဖြစ်ကြသည်။
ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထား၍ ကြွရောက်သူများ ညလုံးပေါက် ပိုကာကစားကြသည်။
နေ့ကြတော့ရုံးဖွင့်၍ အိပ်ကြသည် ထို့ကြောင့်မိမိအတွက် ပြဿနာမရှိ ၊ တခါတရံ လူမပြည့်၊ ၀ိုင်းမဖြစ်မှာစိုး၍ သူတို့ကပင်မျှော်နေ သေးသည်။
ပို၍လုံခြုံသည်က ထိုရုံးတစ် ဖွဲ့လုံး (တောင်ငူမြို့၊မြို့ကြီးရပ်ကွက်တွင်နေသော ကရင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ၊ စောရူ ဘီ တို့ ကရင်အဖွဲ့နှင့် ပေါင်း၍ ဆန္ဒပြသည့်အထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်မှအပ ) အရေးအခင်းတွင်ပါဝင် လှုပ်ရှားမှုမရှိခဲ့။
တစ်ည..ပိုကာကစား ကြရင်း နိုင်ငံအ၀ှမ်းလှုပ်ရှားမှုတွင် ဘာကြောင့်မပါဝင်သည်ကို မိမိက မေးသဖြင့် မိတ်ဆွေ အရာရှိက ၀ိုင်းထဲတွင် ထိုင်နေသော ကရင်ဝန်ထမ်းနှင့် …..ဇနီးကရင်ဖြစ်၍ ကရင်အုပ်စုနှင့်နီးစပ်သော မိမိအား ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ် သည်။
ထိုစဉ်က BBC VOA တို့မှ KNU သည် ပြေးလာသော “ ကျောင်းသား” များကို လက်ခံလျှက် ရှိပြီးဗိုလ်ချုပ်မြက လက်နက်များပင်တပ်ဆင်ပေးမည်ဟု ပြောကြောင်း သတင်းများကြားရသည် ။
သို့ရာတွင် မိမိ အနေဖြင့်မူ KNU ဆိုသည်မှာ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊ KNU နယ်မြေ တွင် ဗမာစကား ပြောလျှင် ကြာကြာမခံ။
ဗိုလ်မြသည် ဗမာဆိုလျှင်မုန်းသည် ဟု နာလည်ထားသည် ။
ထို့ကြောင့် နားရှိ၍ သာကြားရသည် ထို..ဗိုလ်မြ..ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပါတ်သက်ဖို့ဝေးစွ မြင်ဖူးဖို့ပင်အကြောင်းမရှိ။
သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး အပြာရောင်သန်းနေသည် မီးလောင်ဖုလို အဖုကြီးများ ၃…၄ ခုတွေ့ရသည် ။
ခြေထောက်အရေပြားများ ပါးနေပြီး လမ်းလျှောက်၍မရနိုင်တော့ဟု သူ့ဇနီးကပြောနေသည်။
ဘယ်ဘက်ခြေထောက် ခြေသလုံးအလယ်မှ စ၍ အရည်ပြားသည် ပလပ်စတစ်အစတစ်ခုလို ပါး၍ဖောက်ထွင်း မြင်နုိင်ပြီးအထဲ မှခြေချောင်းရိုး ဖြူဖြူများကို ခြေဖျားအထိ အတိုင်းသားမြင်နေရသည်။
ကျွန်တော်ကြည့်ရင်း စိတ်အတော်ခြောက်ခြားသွားသည်။ စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိသည် ။ ထိုစဉ်မှာပင် သူကရုတ်တရက်ထရပ်၍… လှေခါးသုံး လေး ထစ်ကို ကျော်ပြီး ခုန်ဆင်းသွားသည်။ အပြင်တွင် မိုးတွေ သဲသဲမဲမဲရွာနေသည် ။ကျွန်တော် စိုးရိမ်တကြီး နောက်မှ ပြေးလိုက်သွားပြီး...... “ တစ်ယောက်ထဲမသွားနဲ့လေ….ရဲဘော်တွေကော……” ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ ဘယ်သွားသွား….သူ့ဘေးတွင် အနည်းဆုံး ရဲဘော်လေး…ငါး…ယောက်..ပါနေကျဖြစ်သည်။ “ သူတို့က ….၅ တန်းကျောင်းသားတွေဘဲ……ငါ့ဆီမှာ ……မပျော်တော့ဘူး…….ထွက်သွားကြပြီ…..”
အဆက်အစပ် မတည့်သောစကားကိုပြောယင်း မိုးရေထဲ ဆက်သွားနေသည်။
“ ဗိုလ်ချုပ်ခြေထောက်တွေက လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးလေ”
မိုးသဲသဲထဲတွင် ဆိုက်ကားတစ်စီးတွေ့၍ ကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုတက်ခိုင်းလိုက်သည် ။
ထိုစဉ် ရှေ့တည့်တည့်မှ နွားလှည်းတစ်စီး အပြင်းမောင်းနှင်လာသည်။ လှည်းတံပိုး များက သာမာန်ထက် ဘေး သို့ နှစ်တောင်ခန့်ရှည်ထွက်နေသည်။
ရှောင်၍ မည်သို့မျှ မလွတ်နိုင်။ထိုလှည်းတံပိုး များက ဆိုက်ကားကို အရှိန် ဖြင့် တိုက်ချသွားသည်။
မိမိတို့မည်သို့မျှမဖြစ် လှည်းတံပိုး ကြီးသာ သစ်ဆွေးတုံးကြီးတစ်တုံးလို ကျိုးထွက်လွင့် ကြွေသွားသည်။
သို့သော် ကျွန်တော် စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ဆိုက်ကားနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။ အားလုံးမှောင် မဲနေသည်။
မိုးသံများကတော့ တစ်ဝေါဝေါ ကြားနေရဆဲ။ သို့သော် ကျွန်တော့်ကိုယ်တွင် လုံးဝစိုမနေ ။
တစ်ကယ်တော့ အားလုံးလွဲနေကြောင်း သတိပြန်ဝင်လာသည်။
တစ်ဝေါဝေါ ကြားနေရဆဲဖြစ်သော အသံများသည် ။
။မိမိမှာလည်း အိပ်ယာထဲတွင် နွေးထွေးသက်သာစွာ ရှိ နေသည် ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာလည်း ၅ နှစ်ခန့်ရှိပြီ။
..ဆိုက်ကားတို့ လှည်းတို့ရှိသော မြန်မာပြည် လည်းမဟုတ်။
အီတလီ နိုင်ငံ၏တောင်ဘက်အစွန်ဆုံး ပင်လယ် ကမ်းခြေတစ်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။
မည်သို့မျှမမှတ်ထင်ထားသော အိမ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဒါလည်း လွဲနေသေးသည် ။
အိမ်မက်ထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်က ကရင့်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဗိုလ်မြ…. စွဲစွဲလန်းလန်းမက်သူ က….ကျွန်တော် ဗမာမောင်ကျော်။ တစ်ကဲ့ကို အားလုံးလွဲနေသည် ။ မနက် ၄ နာရီခန့်ဖြစ်နေသည်။ ပြန်အိပ်၍မရတော။့
တကယ်တော့ မိမိသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြနှင့် လက်ပွန်း တတီး ကြာရှည်စွာမနေဖူးခဲ့။
သို့သော် တာဝန်ဖြင့်အကြောင်းဆုံ၍တွေ့တိုင်း ထူးခြားသော၊ရိုးသားလေးစားဖွယ်ကောင်း သော သူ့ဓလေ့စရိုက်များကို တွေ့ကြုံရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မြရိုးသားသည်၊ သို့သော် မအ ပါ ။
ခိုင်မာသည်...သို့သော် ပြောင်းရဲ... ပြင်ရဲသည်။ တက်ရဲ...ဆုတ်ရဲသည်။
သူနှင့်ဆုံခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ များကို ထွေရာလေးပါးစဉ်းစားရင်း ပြန်အိပ်မရတော့ ။
အိပ်ယာမှထ၍ ရေနွေးတည်ပြီး ရေနွေးတစ်ခွက်ကိုင်ရင်း တံခါးဖွင့်လိုက်တော့ အလင်းရောင်လာနေပြီ။
၇ နာရီ ထိုးတော့မည်။
ပြာလဲ့သောပင်လယ်ပြင်၏ တစ်ဖက်နားတွင် မီးခိုးများထွက်နေသော မီးတောင်တစ်ခု နှင့်ကျွန်း ဆွယ်တန်းကို ခပ်မှုန်မှုန် လှမ်းမြင်နေရ သည်။
ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီး နှစ်ဦး၏ ဇာတိမြေ စစ်စလီကျွန်း ဖြစ် သည်။
တစ်ဦးမှာပညာရှိ “ အာခိမိဒိ” ဖြစ်သည် ။ အခြားတစ်ဦးမှာ..မာဖီးယား၏ဖခင် “ ချာလီလပ်ကီးလူစီယာနို ” ဖြစ်သည်။
ထိုခေတ်ထိုအခါက ထိုဒေသတွင် လူမိုက်သူခိုး ဓါးပြများ ပေါများပြီး မင်းမဲ့စရိုက်ထွန်းကားသည် ။
လာဘ်စား အကျင့်ပျက်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုပါသော နိုင်ငံ အစိုးရ ကလည်း ရိုးသားသော လူတန်းစားကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်။
အကျင့်ပျက်များကသာ ဥပဒေကိုလိုသလို ကိုယ်ကျိုးအသုံးပြုနေကြသည်။
ထိုစဉ်က မဟုတ်မခံ ထက်မြက်သောလူငယ်တစ်ဦးသည် မတရားခံရသူများ ဖက်မှ “ ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် ” လက်စားခြေ အကာအကွယ် ပေးရင်း အင်အားကြီးမားလာခဲ့သည်။
ထိုလူငယ်မှာ “ ချာလီလပ်ကီးလူစီယာနို (အီတလီ အခေါ် ..လူချားနို)” ဆိုသူ စစ်စလီကျွန်းသားလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ထိုအုပ်စုမှ အရှိမ် အ၀ါ ကြီးမားသော မာဖီးယား ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်အဖွဲ့ခွဲများပေါ်ပေါက်၊နေရာလု၊အချင်းချင်းသတ်ကြဖြင့် ယခုအခါ မာဖီးယား ဆိုသည်မှာ...
ဤဒေသ တွင် ရိုးသားစွာလုပ်ကိုင်စားသူ များအပေါ် ခြိမ်းခြောက်ငွေညှစ် စားသောအဆင့်သာရှိတော့သည်။
အရှိန်အ၀ါကြီး မားထက်မြက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်များ ရှိပုံမရတော့။
“ကရင့်တော်လှန်ရေး” ကကောဘယ်လိုပါလိမ့်၊ မဆီမဆိုင် ဆက်စပ်တွေးမိရာမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြနှင့် နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်ကို သတိယလာမိသည်။
Posted by KCA.UK at 13:290comments
Posted by KCA.UK at 15:580comments
Posted by KCA.UK at 15:510comments